भद्रगोल इमर्जेन्सी, कोभिड लागेका र नलागेका बिरामी एकै कक्षमा | eAdarsha.com
पोखरा । वरपर बेडका १० जनामा कोरोना संक्रमण, त्यही १० मध्ये १ जनाको कोरोना कै कारण मृत्यु । ५ जना अझै कोरोना रिजल्ट कुरिरहेका छन् । सबैलाई अक्सिजन दिइएको छ, सबैको मुखमा देखिन्छ, अक्सिजन मास्क । त्यही बिरामीलाई पारामेडिकहरुले बिना पिपिई जाँच गरिरहेका छन् । दृष्य थियो, सोमबार दिउँसो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (गण्डकी हस्पिटल) इमर्जेन्सी विभागको ।
त्यहीं थिए, स्याङ्जा हरिनासका अनील क्षेत्री । शनिबारदेखि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (गण्डकी हस्पिटल) को ‘इमर्जेन्सी विभाग’ मा छन्, उनी । क्षेत्रीका ठूलोबुवालाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबार राति क्षेत्रीय अस्पताल भर्ना गरेका हुन् । शनिबार रात परेपछि आइतबारमात्र चिकित्सकको सल्लाहमा उनको ठूलोबुवाको बिहान स्वाब कलेक्सन भयो । निजी ल्याबमा पिसिआर परीक्षण गरेकाले रिपोर्ट बेलुका ८ बजेतिर नै हात प¥यो, ‘पोजेटिभ’ ।
रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि आइसोलेसनमा भर्ना गर्ला भन्ने सोचेका क्षेत्रीका ठूलोबुवालाई सोमबारसम्म इमर्जेन्सीमा राखिएको छ । उनका आफन्तसँगै भर्ना भएका केहीको रिपोर्ट पनि पाजेटिभ आएपछि उनी सशंकित छन् । ‘गाउँबाट बिरामी कुरुवा भएर आइयो,’ उनले भने, ‘आफैं कोरोना संक्रमित भइएला जस्तो छ ।’ इमर्जेन्सीको सबै बेडमा राखिएको बिरामीको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएको उनले बताए । सबै बिरामी पिसिआर रिजल्टको पर्खाइमा बसेको उनको भनाइ छ ।
उनको ठूलाबुवाको छेवैको बेडमा राखिएको १ बिरामीको सोमबार बिहान १० बजेतिर मृत्यु भयो । स्वाब परीक्षणको नतिजा पर्खाइकै क्रममा ती बिरामीको मृत्युपछि ४ बजेमात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । त्यसपछि उनी झन् धेरै डराएका छन् । ‘यो पाराले त भएन, कोरोना देखिएको र रिजल्ट पर्खाइमा भएकाहरु सबै एकै ठाँउमा छन्, उनले भने, ‘यस्तो भएपछि त इमर्जेन्सीमा भर्ना हुने सबैमा कोरोना देखिन के बेर ?’ त्यही भए पनि अस्पतालले अक्सिजनको व्यवस्था गरेर राम्रो गरेको उनको प्रतिक्रिया थियो । उनको ठूलोबुवालाई अहिलेसम्म त्यति साह्रो समस्या नरहे पनि आइसोलेसनमा नराखी इमर्जेन्सीमै राख्दा समस्या थपिने हो कि? भन्ने चिन्ताले निकै सताएको छ क्षेत्रीलाई ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रील अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागको एउटा कोठामा १५ जना बिरामी रहेको १ चिकित्सकले जानकारी दिए । ‘यहाँ १० जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ भएको केस छ, ती मध्ये १ जनाको मृत्यु भइसक्यो,’ ती चिकित्सकले भने, ‘अरु ५ जना रिपोर्टको पर्खाइमा छन्, रिपोर्ट पर्खाइमा रहेकाहरु सबै संक्रमित होलान्जस्तो लाग्छ ।’
गण्डकी हस्पिटलमा जम्मा २६ बेड रहेको उनको भनाइ छ । २ वटा बेड तत्काल आएका बिरामी जाँच गर्नका लागि छुट्याइएको छ । केही शंकास्पद केस अरु रुममा पनि राखिएको उनले बताए । इमर्जेन्सीमा १ जना हाडजोर्नीको बिरामीबाहेक सबै शंकाको घेरामा रहेका बिरामी छन्। कोरोना संक्रमित इमर्जेन्सीमा भर्ना हुन थालेपछि अरु बिरामी हेर्नै समस्या परेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ त हामीले एउटा एप्रोनको भरमा काम गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ त एकछिनमै काटेको, घाउ भएको, हातखुट्टा भाँचिएको केस आउँछन्, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’ कोरोनाका बिरामी हेरेर घाउ चोट लागेका बिरामी हेर्दा आफूहरुकै माध्यमबाट अरुलाई पनि सर्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । आफूहरुले कोभिडको बिरामी हेर्नुपर्दा आफैं संक्रमित हुने हो कि? भन्ने त्रासमा काम गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
यता, अस्पतालको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भने आइसोलेसनका लागि तयारी भइरहेको हुँदा कोरोना संक्रमितलाई पनि इमर्जेन्सीमा राख्नुपरेको जनाएको छ । आफूहरुले तयार गरेर राखेको आइसोलेसन भरिएका कारण मेडिकल वार्डमा ४० बेडको आइसोलेसन बनाउन लागिएको प्रतिष्ठानका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) डा. शरदचन्द्र बरालले बताए । ‘मेडिकल वार्डमा बनाउने भनिएको ४० बेडमा अक्सिजनको व्यवस्था गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘मंगलबार बिहानसम्म तयार गर्ने गरी काम भइरहेको छ, त्यतिञ्जेलसम्मका लागि संक्रमितलाई मात्र छुट्याएर एकातिर राखेका छौं । ननकोभिडलाई अर्कोतिर राखेका छौं ।’
अक्सिजनको सुनिश्चित गरेर मात्र आइसोलेसन तयार गरेर सार्ने गरी काम अगाडि बढेको उनले बताए । इमर्जेन्सीमा पनि बेड भएन भनेर अर्को अस्पतालतिर रिफर गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने उनको भनाइ छ । यति धेरै अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामी आउलान् भनेर कहिल्यै नसोचेको बरालले बताए । एक्कासि अक्सिजन नै आवश्यक पर्ने संक्रमित आउँदा त्यही अनुसारको आइसोलेसनको तयारीमा रहँदा सोमबार भर्ना गर्न नसकिएको बरालले बताए । भर्ना हुने सबैलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परिरहेको डा. बरालको भनाइ छ ।